भारतमा पहिलो चरणमा ३० मिलियन कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लगाइनेNepalpana - Nepal's Digital Online
भारतमा पहिलो चरणमा ३० मिलियन कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लगाइने
Nepal Pana पौष २९ २०७७
नयाँ दिल्ली । भारतमा १६ जनवरीदेखि सुरु हुने कोरोना महामारीविरुद्धको खोप अभियान निशुल्क प्रदान गरिने भएको छ ।
विश्वमै सबैभन्दा ठूलो खोप अभियान सुरु हुने भनिएको भारतमा ३० करोडभन्दा बढी मानिसहरुलाई पहिलो चरणमा लगाइने भएको छ ।
भारतका केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री हर्ष बर्धनले शनिबार एक करोड स्वास्थ्यकर्मी र दुई करोड फ्रन्टलाइन कामदारहरूलाई खोपको पहिलो चरणमा निःशुल्क खोप दिइनेछ ।
"खोप अभियानका लागि पहिलो चरणमा देशभरिका अधिकांश प्राथमिकता प्राप्त लाभार्थीहरूलाई नि: शुल्क खोप उपलब्ध गराइनेछ । जसमा एक करोड स्वास्थ्य सेवा र २ करोड अग्रणी कामदारहरू छन्," बर्धनले ट्वीटमा भनेका छन् ।
भारतको ड्रग्स रेग्युलेटर (औषधि नियमन) निकायले दुईवटा खोपलाई औपचारिकरुपमा प्रयोगको अनुमति प्रदान गरेको थियो । अक्सफोर्डको कोभिड–१९ खोप कोभिशिल्ड र भारतको बायोटेक कम्पनीले निर्माण गरेको कोभ्याक्सिनलाई भारतले अनुमति प्रदान गरेको हो । भारतमा करिब पाँच करोडभन्दा बढी खोप भण्डारण भइसकेको बताइएको छ ।
ड्रग्स कन्ट्रोलर जनरल अफ इन्डियाले कोभिशिल्ड खोप ७०.४२ प्रतिशत प्रभावकारी भएको बताएको छ । कोभ्याक्सिन भारतमै तयार गरिएको खोप हो । यसलाई भारत बायोटेकले इन्डियन काउन्सिल अफ मेडिकल रिसर्चसँग मिलेर निर्माण गरेको हो । डीसीजीआईका निर्देशक डा. वीजी सोमानीले भारत बायोटेक कोभ्याक्सिन सुरक्षित र इम्युनको मजबुद बनाउन सक्षम रहेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्वीट गर्दै भनेका थिए, "डीसीजीआईले सीरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डिया र भारत बायोटेक भ्याक्सिनलाई अनुमति दिएको छ। यसले देशलाई कोरोनामुक्त बनाउन सहयोग गर्नेछ, बधाई भारत ।"
पौष २९, २०७७ बुधवार ११:३५:५५ बजे : प्रकाशित
प्रदीप ज्ञवालीले सिमा मुद्दालाई सशक्त रुपमा उठाएपछि नयाँ दिल्ली तरंगित, यस्तो आयो प्रतिक्रिया !
बस र ट्रक ठोक्किए : ११ जनाको मृत्यु, ७ जना घाइते